Microdermal, dhammaan su'aalaha iyo jawaabaha ku saabsan abuurkan | Tattoo
Microdermal, dhammaan su'aalaha iyo jawaabaha ku saabsan maqaarkan
Ma aha Cherry | | mudaysa
Qalabyada Microdermal waa kuwo cajiib ah iyaguna way qurux badan yihiin. Xaqiiqdii waad aragtay iyaga: waa nooc ka mid ah mudaysa maqaarka hoostiisa.
Kadib waxaan ka jawaabnaa dhammaan su'aalaha iyo jawaabaha si aan u xallino shakigaaga ku saabsan abuurkan xiisaha badan ee qaaliga ah.
1 Waa maxay maqaar-siiyaha microdermal?
2 Jawharadu waa sidee
3 Sidee buu maqaarku u sameeyaa?
4 Khataro noocee ah ayey leedahay?
Waa maxay maqaar-siiyaha microdermal?
Qalabkani waa abuur cusub, maxaa yeelay waxaa alifay isbadal-sameeyaha Emilio González, oo ka yimid Venezuela, sanadii 2004, isla markiiba wuxuu noqday mid caan ah oo horeyba adduunka oo dhan loogu baahiyey. Fikradda González waxay ahayd dhig jawharad meel kasta oo maqaarka hoostiisa ah, si ka duwan daloolinta caadiga ah, oo u baahan "qanjaruufo" sida dhegta ama bushimaha si ay u awoodaan inay maqaarka maqaaraan.
Jawharadu waa sidee
Dahabka loo isticmaalo qalabkan lagu rakibay badiyaa waxaa laga sameeyaa titanium si ay u sii jiraan sida ugu macquulsan. Waxay ka kooban yihiin saldhig yar oo leh meel sare oo ku taal bartamaha taas oo ah tan maqaarka ka soo bixi doonta iyo halka dahabka lagu xoqidoono. Nidaamkani wuxuu noo ogolaanayaa inaan bedelno qaybta muuqata ee maqaar-galaha markasta oo aan rabno.
Sidee buu maqaarku u sameeyaa?
Waxaa jira dhowr hanaan oo suurtagal ah, laakiin aasaasku waa isku mid: ka jeex maqaarka, adigoon u baahnayn suuxdin, si aad u geliso salka jowharka irbad gaar ah. Kadib waxaad ku wareejinaysaa dusha sare oo waad dhamaysay. Waa dhakhso badan yahay umana baahna suuxdin.
Haddii aad rabto inaad ka noqoto, Daloolinkan, oo ah mid joogto ah, si dhib leh ugama tagayo nabar.
Khataro noocee ah ayey leedahay?
Sida dhammaan wixii la geliyey iyo muday, Microdermal maaha mid aan qatar lahayn, taasi waa sababta ay muhiim u tahay inaad hesho xirfadle aqoon u leh oo fuliya isla markaana aad raacdo tilmaamahooda warqadda.
Halista ugu badan waxaa ka mid ah caabuqyo, xanuun, barar, dhiig bax, ama waxyeelada neerfaha.
Microdermal wuxuu umuuqdaa mid aad u qurux badan oo aad uga duwan daloolada kale, sax? Noo sheeg haddii aad wax ku leedahay faallooyinka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » mudaysa » Microdermal, dhammaan su'aalaha iyo jawaabaha ku saabsan maqaarkan
Tattoo Pisces, oo adduunka u muujinaysa calaamadahaaga xiddigiska
Warqad qurux badan oo loogu talagalay tattoos waaweyn iyo yar yar